राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई बिरेन्द्र शाह वंशको हत्यारा हो भनी दोष लगाउने राजनीतिक दलहरूको सरकारले प्रमाणित गर्न सकेको खोइ ? « Pariwartan Khabar
राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई बिरेन्द्र शाह वंशको हत्यारा हो भनी दोष लगाउने राजनीतिक दलहरूको सरकारले प्रमाणित गर्न सकेको खोइ ?
6 December, 2020 10:55 am
राकेश कुमार शर्मा, राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई केही अबुझहरुको झुँड र छोटो मानसिकता भएकाहरूले राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई बिरेन्द्र शाह वंशको हत्यारा अर्थात दाइको वंश विनाश गर्ने हो भनी नाम बदनाम गराउने गरेका छन । प्रायःजसो लेखहरुको कमेन्टमा पनि बिरेन्द्र शाह वंशको हत्यारा राजा ज्ञानेन्द्र शाह नै हो भनी दोष दिने गरेका छन । यसप्रकार बिरेन्द्र शाह वंशको हत्यारा ज्ञानेन्द्र शाह हो भनी आजसम्म राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई दोष र आरोप लगाउँदै षड्यन्त्र रच्दै सबैलाई भ्रममा पार्ने काम भएको छ ।
राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई आरोप र दोष दिने तत्वहरुलाई म के भन्न चाहन्छु विक्रम सम्वत २०६२/०६३ सालपछि मुलुकमा माओवादीको सरकार, काँग्रेसको सरकार, एमालेको सरकार, खिलराज रेग्मीको सरकार थियो र हाल कम्युनिस्टको सरकार छ । राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई आरोप र दोष लगाउँदै सबैलाई भ्रममा पार्ने काम भएको छ ।
राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई आरोप र दोष लगाउने तत्वहरुलाई म के चुनौती दिन्छु भने मुलुकमा २०६२/२०६३ सालपछि राजनीतिक दलहरूको सरकार थियो र कम्युनिस्टको सरकार छ पनि आँट, हिम्मत, साहस र पुरुषार्थ छ भने बिरेन्द्र शाह वंशको हत्या गर्ने नै राजा ज्ञानेन्द्र शाह हो भनी प्रमाणित गर्नुहोस र जेल हाल्नुहोस होइन भने राजा ज्ञानेन्द्र शाहको दोष लगाएर भ्रममा पारी झुक्याउने काम कसैलाई पनि नगर्नुहोस ।
२१ औं शताब्दीको युग हो श्री ५ महेन्द्र शाह, मदन भण्डारी, जीवराज आस्रित र बिरेन्द्र शाह वंशको हत्या किन र के कारणले भयो अब धेरैले बुझी सकेका छन ।
मैले पटकपटक भन्दै आएको छु । वास्तवमा राजा ज्ञानेन्द्र शाह परिवार सच्चा देशभक्त भएकोले नै सत्ता छोडनुपर्ने अर्थात सत्ता बाट बहिर्गमन हुने अवस्था आएको हो । राजा ज्ञानेन्द्र शाह परिवार कहिले सम्म देशभक्त बन्ने रु राजा ज्ञानेन्द्र शाह परिवार मात्र देशभक्त भएर सम्भव छ ? जनताहरु कसैलाई पनि राष्ट्रियता संग सरोकार छैन ।
तीन करोड जनताहरु मध्ये अपवादको रूपमा राजा ज्ञानेन्द्र शाह जस्तै दशबीस हजार देशभक्त होलान बाँकी सबै राजनीतिक दलहरूका कार्यकर्ताहरु मात्र छन । राजा ज्ञानेन्द्र शाह परिवारले मेरो यो यथार्थ कुराहरूलाई राम्ररी मनन गर्नुपर्ने र बुझ्नुपर्ने हो ।
कुटनीतिकमा शुन्य र सच्चा देशभक्त हुनु नै राजा ज्ञानेन्द्र शाह परिवारको लागि दुर्भाग्य र अभिशाप ठहर हुन गयो ।